Xuuthiyiinta Yemen oo codsanaya iscasilaada Madaxweyne Hadi • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xuuthiyiinta Yemen oo codsanaya iscasilaada Madaxweyne Hadi
December 9, 2018 - By: Abdirizak Shiino
Wadahadalkii dhinacyada Yemen uga socday dalka Swedenayaa la isku mari la’ayahay kadib markii xoogaga xuuthiyiinta ay shuruudo adagku xireen inay wareejiyaan goobaha muhiimka ah oo ay gacanta ku hayaan.
Shirka ka socda duleedka magaalada Stockholm oo ay Qaramada Midoobay soo diyaarisay ayaa rajo weyn laga qabay in lagu xaliyo dagaalka khasaaraha badan ka dhashay ee ka socda dalka Yemen sadexdii sano ee lasoo dhaafay.
Kooxda Shiicada ah ee Xuuthiyiinta ee iyagu gacanta ku haya caasimada Sanca ayaa sheegay inay doonayaan in marka hore uu xilka iska casilo Madaxweynaha dowlada caalamka Aqoonsan yahay ee Abdulrabi Mansuur Hadi, iyagoo doonaya in la dhiso dowlad kumeel gaar ah.
Waxay Xuuthiyiinta sidoo kale sheegeen inaysan dooneyn in xulafada dowlada Yemen ee Sacuudiga iyo Imaaraatiga lagu wareejiyo magaalada dekadda-leh ee Xudeyday oo ay sheegeen inay doonayaan in dhulkaasi oo uu hada dagaalka xoogan ka socdo noqdo goob ciidamada ka caagan.
Dhinaca wafuuda ka socda dowlada Yemen ayaa diidan soo jeedinta xuuthiyiinta iyagoo sheegay in Madaxweyne Hadi si sharci ah lagu doortay isla markaana ay Xuuthiyiinta ay yihiin kuwa inqilaabka awooda ku qabsaday lagana doonayo inay ka baxaan xarumaha dowlada.
Khubaradii UN-ka oo soo bandhigay baritaankoodii dilkii Jamal Khashogi
FRANCE: Madaxweynihii hore Sarkozy oo Maxkamada la horgeyn doono
Qaramada Midoobay oo ku baaqday baaritaanka geeridii Maxamed Morsi